Vamwe Vatsigiri veMDC Vodzoserawo Mukurwiswa Kwavari Kuitwa
Nekuda kwekuramba vachishungurudzwa vakanyarara, vamwe vatsigiri veMDC vanonzi vava kudzoserawo mukuzvidzivirira, apo vanenge vachirwiswa nevatsigiri veZanu PF.
Izvi zvinonzi zviri kuitika kuMhangura mudunhu reMashonaland West, uko vatsigiri veZanu PF vanonzi vakabva mumapurazi akapoteredza Mhangura, vakapisa dzimba dzevatsigiri veMDC. Nemusi weChitatu, vatsigiri veMDC vanonzi vakazounganawo vakazvidzivirira, izvo zvakaita kuti misha yevatsigiri veZanu PF iparadzwewo mukurwisana kwakaitika.
MuShamva kuMashonaland Central uko kwakaparadzwa dzimba nemidziyo yevatsigiri veMDC neChina, zvinonzi veMDC vakazobatanawo vakazvidzivirira, sezvo vasiri kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kumapurisa.
KuZaka West, vanhu vanonzi vari kushungurudzwa paVeza nepaMageza Business Centre, uye pachikoro cheMuchokwa, uko veZanu PF vari kumanikidza vavanenge vashungurudza kubvisa mombe, mbudzi, huku uye mari.
Nemusi weChipiri, kuRenco Mine, Masvingo Central, masabhuku mana anonzi akarohwa zvakaipisisa vakagurwa mazino vachinzi ndeve MDC.
Zvichakadaro, vanhu vanodarika makumi mana vakanga vaungana pachechi yeUnited Methodist, iyo iri kuMufakose muHarare, mushure mekutiza mhirizhonga mumaruwa, vanonzi vakasungwa nemapurisa musi weChitatu uye vakachengetwa paMarimba Police Station.
Mumwe mugari wekuMhangura, Amai Benardett Dhakwa, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti masoja nemapurisa anodzivirira mhirizhonga, ndivo vakazodzimura mhirizhonga iyi mushure mekunge veZanu PF vakundwa.